केले संग प्रतिस्पर्धा: हृदय देखि रमाइलो
बिदाहरू सबै अपवाद बिना प्रेम। यो ठूलो भोजन, प्रियजनलाई कुराकानी, मजा सोख हो। तर भोजमा यो एक मनोरञ्जन कार्यक्रम तयार गर्न आवश्यक छ, एउटा नीरस जमघट बन्न गर्दैन। प्रतियोगिताहरु, क्विज, खेल साँझ सकारात्मक टिप्पणी दिनेछु। अतिथिहरूको पूर्ण खेल र प्रतियोगिताहरु केले संग प्रसन्न हुनेछ। र मजा खेल खर्च र रिले दौड वयस्क र बच्चाहरु उस्तै संग दुवै हुन सक्छ! एक सानो कल्पना र प्रयास, र आफ्नो छुट्टी संग भावना र आनन्द को एक वास्तविक शो हुनेछ!
नयाँ वर्षको म्याराथन
को जाडो बिदा जादु सबै इंतजार छन्। बच्चाहरु सबैभन्दा स्वागत उपहार खोल्न चाहनुहुन्छ, र आमाबाबुले काम र समस्या बाट बाँकी छ। त्यसैले, ती अद्भुत दिन छैन नरमाइलो गरिनेछ! किनभने यस्तो क्षणमा स्मृति मा लामो रहने, सबै नातेदार र साथीहरू सङ्कलन। कार्यक्रम को नङ - केले एउटा प्रतियोगिता! पाकेको फल एक गुच्छा किन्न र सुरु गर्न सक्नुहुन्छ!
यो लडाइँ मा, मेहमान खेलाडीहरूलाई र सारा महाराज महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। थाक shpazhek - एक प्लेट मा पूर्व-कट केले स्लाइस को अङ्गुर र जैतून नजिकै राख्नुहोस्। अतिथिहरूको दुई टोली विभाजित र रमाइलो रिले दौड सुरु गर्दै! को सहभागी skewers केरा, अङ्गुर र जैतून मा strung तालिका, पुग्न अनिवार्य छ। त्यसपछि उहाँले आफ्नो सिर्जना relish संग खाने र ठूलो स्वरमा कराउछ: "! केरा - स्वर्गीय आनन्द"। विजेता केले संग पहिलो प्रतियोगिता समाप्त कि टोली छ।
भाग्य पारंगत, तर कार्ड संग छैन
हामी प्रत्येकले पनि एक पल को लागि, भविष्यमा हेर्न चाहन्छ! जिज्ञासा - कुनै उपाध्यक्ष छ। तपाईंको अतिथि मौका दिनुहोस्। एक जिप्सी मा पोशाक: आफ्नो टाउको, व्यापक स्कर्ट मा एक रुमाल आवश्यक र थप आभूषण flowered। एक भाग्य-पारंगत को हात मा कार्डहरू एक डेक, र केले को एक टोकरी छैन। तिनीहरूले अग्रिम तयार गर्न आवश्यक छ। एक साधारण कलम भविष्यवाणी प्रत्येक फल लेख्नुहोस्। तिनीहरूले सकारात्मक र विनोदी हो भने यो राम्रो छ। नयाँ वर्ष मा केले यस्तो प्रतियोगिताहरु मज्जा गर्न आयोजित।
तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ को उदाहरण:
नयाँ वर्ष तपाईं एक oligarch हुनेछ;
नयाँ विदेशी कार मा आफ्नो ग्यारेज गरिनेछ मा वसन्त;
तलब लाख - कि गरेको एक उपहार देखि व्यवस्थापनमा जनवरी;
को केले निल्न भने, बीस वर्ष pomolodeesh;
जोडाहरू वा जोडाहरू - ठीक देख्न सक्नुहुन्छ।
हँसिलो भविष्यवाणी अप मज्जा र रहस्य को साँझ दिनुहोस्।
अतिथि रम्न गर्न, तिनीहरूलाई केले एउटा असामान्य प्रतियोगिता प्रस्ताव। यो प्लास्टिक गोलीले शुट एक बन्दूक संग एक खेलौना बन्दूक लिन थियो। अंक - यो मीटर डोरी मा तिनीहरूलाई चित्रित नम्बरसहित केले बाँध। पालैपालो हुनेछ तिनीहरूलाई सबै गोली, र सोही दूरी देखि। प्रत्येक अतिथि तिनीहरूलाई कमाएका गणना अंक को अन्त मा तीन शट दिन सक्छन्। जसले "nastrelyal" सबैभन्दा, WINS पुरस्कार!
बालक जस्तो ठट्टा
यदि छुट्टी मा धेरै rebyatni, र तपाईं, यो vagaries र घाइते जोगिन बच्चाहरु मजा प्रतियोगिताहरूमा संग खर्च गर्न चाहन्छु। त्यसपछि तिनीहरूले व्यापार मा आफ्नो सख्त पर्यवेक्षण अन्तर्गत संलग्न गरिनेछ। बच्चाहरु को लागि केले संग प्रतियोगिताहरूमा छन् मोबाइल, रचनात्मक, खेल, वैविध्यपूर्ण छन्। स्टार्टर्स लागि, तपाईंले आफ्नो मांसपेशीमा एक सानो सुत्छन् गर्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो रिले दौड "सानो बाँदर" सबै भन्दा राम्रो फिट। दुई टोली मा बच्चाहरु विभाजन र तिनीहरूलाई दिन को बाँदर मास्क, त्यसपछि तिनीहरूले राम्रो भूमिका vzhivutsya। बच्चाहरु आफ्नो मुख मा एक केले संग रेखा गर्न चलिरहेको पालैपालो लिनुहोस्, र त्यहाँ एक टोकरी मा उसलाई। मुख्य कुरा खानी सडक ड्रप छैन। केले तल्ला छोयो भने, पार्टी फिर्ता आउँछ र फेरि सुरु हुन्छ। खुशी केले खान्छ संग कार्य पूरा गर्न पहिलो टोली।
बच्चाहरु painting र आफ्नै हातले केही tinkering, माटो मा sculpt प्यार। बच्चाहरु को लागि केले संग रचनात्मक प्रतियोगिताहरूमा - आमाबाबुको लागि मौन को एक घण्टा। माटो, निर्माण कागज, मार्कर, मोती, rhinestones, पर्चा तयार। प्रत्येक बच्चा एक केले दिन, र तिनीहरूले खुसी रूपमा फल सजाउनु छ। प्रेरणा संग मान्छे व्यापार मा संलग्न गरिनेछ, र वयस्क चुपचाप कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जीत, को पाठ्यक्रम, मित्रता! आखिर, सबै तपाईं छैन masterpieces सबैभन्दा शानदार चयन गर्न। सत्यनिष्ठा जवान प्रतिभा सानो पुरस्कार हस्तान्तरण!
फोटो शूट - यो गरेको धेरै रोमाञ्चक र उपयोगी रोजगार। अतिथिहरूको पर्याप्त nasmeyutsya, तर अझै पनि यो अद्भुत दिन को स्मृति मा उज्ज्वल तस्वीर प्राप्त। पोस्टर, भित्री वस्तुहरूको सहायता र आफ्नो irrepressible कल्पना संग फोटो क्षेत्र सजाउनु। मुख्य विशेषता - एक केरा, यसलाई बाँदर आफूलाई प्रतिनिधित्व र रूपमा खडा क्षति गर्न सक्नुहुन्छ हास्यास्पद अनुहार। फोटो उज्ज्वल र असामान्य हुनेछ।
एक गएर सांगीतिक शो व्यवस्था। यस्तो प्रतियोगिता संग केले इच्छा कारण एक समुद्र को भावना। ध्वनि प्रत्येक सहभागी चरण मनपर्ने हिट मा गाउँछन् गरौं। र एक माइक्रोफोन रूपमा सबैलाई मनपर्ने पहेंलो मीठो केले प्रयोग गर्दछ। यो कार्यले तारा वेशभूषा आवश्यक हुनेछ। उपयुक्त wigs, टोपी, जैकेट, स्कर्ट। सबैलाई एक पप स्टार जस्तै महसुस गर्न सक्षम हुनेछ!
भुक्तानी ध्यान आफ्नो प्रियजनलाई, व्यवस्था तिनीहरूको प्रमुदित चाडहरूमा। अलिकति प्रयास र धैर्य, र यो सबै सराहना हुनेछ!
कुनै सुर्ति दिन - चुरोट बिना बाँच्न मौका
इस्टर के बधाई अवस्थित
धूप लाठी: सत्य र कल्पना
"सुल्तान बीच" Kemer छुट्टी रमाइलो को लागि एक ठूलो विकल्प छ
अष्ट्रेलिया केही marsupials: सूची र वर्णन
मडागास्कर देखि जिराफ: वर्ण, उपस्थिति, बानी
घरमा ताराहरु - को विशेषताहरू
Stuffy नाक, के, घटेको मदत छैन। कसरी रूघाँ र नाक भीड को छुटकारा गर्न?
पेरिस डिज्नील्याण्ड मा आकर्षण, वा कथा स्वागत
रातो कपाल रंग
वैक्यूम चिमटी: विवरण र विशेषताहरु
Hlestov दिमित्री: फुटबल बिना एक दिन। जीवनी रूसी रक्षक
भोल्टेज नियामक VAZ - सडक सुरक्षा
1915 को अर्मेनियाई नरसंहार: गराउँछ। 1915 को अर्मेनियाई नरसंहार: प्रभाव। को 1915 नरसंहार को इतिहास